Khubaza iWindows Live Mail kuMozilla Firefox | Izindaba zamagajethi
Ungayikhubaza kanjani iWindows Live Mail kuFirefox
Esinye sezihloko ezifunwa kakhulu kwi-Intanethi yilokhu, okungukuthi, kungenzeka khubaza iWindows Live Mail kusuka kokukhethwa kukho kwemenyu yokuqukethwe lokho kuvame ukuvela kusiphequluli sethu; Ukuze sicacise kakhudlwana ngalokho esikuphakamisayo kule ndatshana, singabeka isibonelo salolu khetho kumenyu yokuqukethwe, lapho ivame ukuvela ezithombeni ezikhona ekhasini lewebhu.
Ngamanye amagama, uma ngesikhathi esithile ubukade unentshisekelo yokuzama ukuthumela isithombe esithile kusuka kubhulogi noma ekhasini lewebhu, konke obekuzodingeka ukwenze ukusebenzisa imenyu yokuqukethwe evela lapho sichofoza esithombeni (noma isithombe ) ngenkinobho yesokudla yegundane lethu. Ngokudabukisayo abantu abaningi abayithandi imiphumela etholwe ngale ndlela, Lesi yisizathu sokuthi kungani ifuna ukwenziwa ingasebenzi I-Windows Live Mail ngokuphepha nangokucacile.
1 Susa ukuxhumanisa noma ukhubaze iWindows Live Mail?
2 Hlela kabusha isiphequluli sethu seFirefox ukuze ukhubaze iWindows Live Mail
Susa ukuxhumanisa noma ukhubaze iWindows Live Mail?
Siwubuze lo mbuzo omncane njengombuzo omkhulu ngoba kwi-Intanethi, imininingwane mayelana nesici sesibili ivame ukucelwa kepha izimpendulo eziningi ezitholakala kuwebhu zibhekisa kowokuqala; Ukucacisa isimo ezinye zalezi zimpendulo ezibhekiswe kuzo, sizomane sithi ukudideka kwenzeka lapho kuzanywa ukucabanga, lokho le nkonzo ye I-Windows Live Mail ixhunywe ku-akhawunti yethu ye-Outloock.com; Uma usafuna ukususa ukuxhumanisa, konke okumele ukwenze yilokhu okulandelayo:
Iya kunkinobho ye-Start Menu.
Esikhaleni sokubhala bhala I-Windows Live Mail.
Lapho uhlelo lokusebenza seluvulekile iya ku- Ifayela -> Izinketho -> I-imeyili Acount.
Hlola lapho i-imeyili yakho ikhona.
Uma ngabe amanye amakheli e-imeyili yethu ye-Outloock.com ekhona lapho, kuzokwanela kuphela ukusula lawa ma-akhawunti kule ndawo. Ezinye izixazululo zisho ukukhipha Windows Essentials, isimo okungafanele senziwe kusukela ngalokhu, iWindows Live Messenger noma ezinye izinsiza ezimbalwa nazo zizokhishwa.
Ngakho-ke siyakwazi ukufeza le misebenzi emi-2, singasho ukuthi ayikho neyodwa yayo esebenzayo noma okufanele yenziwe, kepha kunalokho yileyo esizoyiphakamisa ngokuhamba kwesikhathi.
Hlela kabusha isiphequluli sethu seFirefox ukuze ukhubaze iWindows Live Mail
Ngokuyisisekelo yilokho esizokuphakamisa kule ngxenye yesibili yendatshana esizinikele kuyo vula I-Windows Live Mail; Uma sisebenzisa iMozilla Firefox (njengabantu abaningi), khona-ke lesi simo singaba lula kakhulu ukusenza, ngoba sizodinga ukwenziwa kabusha kabusha kokucushwa kwangaphakathi kwalesi siphequluli se-Intanethi. Ku vula I-Windows Live Mail kusuka eMozilla Firefox, kufanele nje silandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Sivula isiphequluli sethu seMozilla Firefox.
Siqonde Izinketho -> Izinketho.
Ewindini elivelayo, sikhetha ithebhu Izinhlelo.
Lezi yizinyathelo ezi-3 kuphela okufanele sizithathe ekuqaleni ukuze sikwazi ukuxhumanisa nesevisi ye- I-Windows Live Mail; ohlwini oluvela ngaleso sikhathi, kufanele sizame ukuthola inketho ebalula «mailto»Kwikholamu yesobunxele, unake izinketho eziboniswa zibheke kukholamu yesokudla nasemugqeni ofanayo.
Kule kholamu yokugcina singabona ukuthi kukhona umcibisholo omncane oguquliwe, okuthi lapho ucindezelwa uzosikhombisa ezinye izinketho ezimbalwa; yilapho ebesingakwazi khona vula I-Windows Live Mail njengensizakalo ezenzakalelayo ngaphakathi kweMozilla Firefox, ukwazi ukukhetha i-Gmail, Yahoo noma enye insizakalo ye-imeyili esiyisebenzisayo; uma sesikhethe insizakalo yeposi esiyithandayo, isikhathi ngasinye lapho sichofoza inkinobho yesokudla yegundane lethu esithombeni, nakwisiphequluli seMozilla Firefox, lapho sithumela esithombeni esinenketho eshiwo ngenhla, ithebhu entsha yesiphequluli izovulwa nge-akhawunti yethu ye-imeyili, kungaba yi-Gmail noma i-Yahoo ngokwalokho esikhethe kukho okukhulunywe ngenhla.
Imininingwane engaphezulu - I-Windows Live Essentials isiyatholakala nge-beta ukulanda
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungayikhubaza kanjani iWindows Live Mail kuFirefox
Ukuhlaziywa kwe-Dead Rising 3